Ilaa intee buu hoos u dhaca bitcoin suuqu sii xamili karayaa – Kiribto Somali Media
Waxan aragnaa hoos u dhac gaaray bitcoin iyo dhamaan lacagaha kiribto balse bitcoin ilaa intee buu hoos u dhaca sii xamili karayaa marka mudada dhow loo eego.
Warbixintan waxan ku eegaynaa waa sidee garafka bixiya xogta faa’iidada la xaqiijiyay iyo qasaaraha la xaqiijiyay dhanka kale waa sidee suuqyada kale ee bitcoin ku xiran sida suuqa derivatives.ka oo isne kaalin ka qaata waaqaca guud ee bitcoin dhinaca suuqa spot.ka
Todobaadyadii ugu danbeyay waxan idhaha ka qaadeynay kor u kaca garafka qiimeeya qasaaraha la xaqiijiyay oo xogta ka keena xirmooyinka bitcoin dhaxdiisa. Bilihii ugu danbeyay qasaaraha la xaqiijiyay wuxuu kor udhaafayey 1.bilyan oo dollar inkastoo dhaq dhaqaaqa todobaadkane suuqu ku jiray xalad iska gadid culus ah.
Hadii aan dib ulaabano waxan arkeynaa in bishii may waxii ka danbeyay suuqu taabtay qasaaraha la xaqiijiyay gaari karaayo 2.bilyan oo dollar taas oo ka dhigaysa 5.tii sano ee ugu danbaysay bitcoin in lacag intaa la eg qasaaro la xaqiijiyay tago. Waxana hormuud ka dhigay soo badashada suuqa loo yaqaan derivatives.ka kuwaas oo dadku lacago aad uubadan uga luntay. hantidoodiina ay ka lugeeyeen.
Inkastoo hadane marka la eego garaf ahaan aan arki kareyno qiyaasta bitcoinka qasaarihiisa la xaqiijiyay hadane dhanka lacagta guud ee bitcoin kujirta tahay mid ka yar sanadyadii hore marka loo eego xaalka meldhaxaadka ah. ee sarifleydu hada fursad galitanka suuqa ka raadinayaan.
Tariikh ahan marka la eego labadan garaf ee kala ah faa’iidada la xaqiijiyay iyo kan kale ee ah qasaaraha la xaqiiiyay waxan arki kareynaa suuqu hada galayo meel sarifleyda iyo qofwalba oo galiya suuqu in uu imaaday goobo garafku naga siinayo go aano aan xogihiisa ku dul saleyn kareyno. Isla markaana ah goob macquul gal tahay in suuqa laga galo, xiliga sidan wax udhacaan.